ဘုန်းကြီးပါစေ ကျန်းမာပြီး သက်ရှည်ပါစေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ဘုန်းကြီးပါစေ ကျန်းမာပြီး သက်ရှည်ပါစေ
ဘုန်းကြီးပါစေ ကျန်းမာပြီး သက်ရှည်ပါစေ
Posted by ခင်ခ on Jan 1, 2013 in Health & Fitness, Society & Lifestyle | 28 comments
လူကြီးသူမတွေကို သွားရောက်ကန်တော့သောအခါ ပေးလေ့ရှိကြတဲ့ ဆုလေးတစ်ခုက “ ဘုန်းကြီးပါစေ သက်ရှည်ပါစေ ´´ လို့ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ယခုခေတ်သစ်မှာ အနေအထိုင် အသွားအလာ အဓိက အစား အသောက် ပုံစံတွေပြောင်းလာကြတယ်၊ ပြုပြင်စီမံထားတဲ့အစာတွေ အလွယ်တကူစားသောက်လို့ရတဲ့ အသင့် စားရယ်ဒီမိတ်တွေ စီပွားရေးဆန်စွာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ မသန့်တဲ့ဆီတွေ ဒါတွေကြောင့် ဘုန်းကြီးရုံ သက်ရှည်ရုံနဲ့ ဆုတောင်းပြည့်ဖို့ထက် ဘုန်းကြီးပါစေ သက်ရှည်ပါစေ ဆိုတဲ့ဆုပေးတဲ့နေရာမှာ “ ဘုန်းကြီးပါစေ ကျန်းမာပြီး သက်ရှည်ပါစေ ´´လို့ ကျန်းမာစေဖို့ပါ ဆုတောင်းပေးရ လိမ့်မယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။
ဆရာဝန်တစ်ချို့နဲ့ စကားပြောဆွေနွေးမှု့အရရယ် ဖတ်ဖူးတဲ့စာပေတွေအရရယ် သက်ရှည်ကျန်းမာဖို့အတွက် အဓိကကျတဲ့ အချက် သုံးချက်ရှိပါတယ်။
လူမှာအမျိုး ကြက်မှာအရိုး ဆိုတဲ့စကားရပ်ကို ကျန်းမာရေးရှု့ထောင့်အရ ရေးရရင် တစ်ချို့ကိစ္စရပ်တွေဟာ မျိုးရိုး လိုက်ပြီး ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်၊ ဥပမာ မျက်လုံး ဆံပင် အသားအရောင် စသည်တို့မှာတွေ့ရနိုင်သလို မျိုးရိုးလိုက်ပြီ ရောဂါဖြစ်နိုင်မှု့တွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ် နှလုံးရောဂါဖြင့် အဘိုးက ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး မိမိမှာနှလုံးရောဂါ ရှိလာ တာမျိုး၊ မိဘတွေမှာ ဆီချိုရှိပြီး မိမိလည်း ဆီချိုဖြစ်လာတာမျိုး ဒါတွေဟာ သတိမထားမိတဲ့ မျိုးဗီဇ နှီးနွယ်မှု့ တွေပါဘဲ။ ထို့ဘေကာင့် အသက်အရွယ် ၅၀ လောက်ရှိလာရင် ဆေးစစ်ဆေးမှု့ တတ်နိုင်လျှင်ပြုလုပ်ပေးသင့် ပါတယ်၊ အဲဒီတော့ မျိုးဗီဇ အကြောင်းလေး ဗဟုသုတအဖြစ် ပြောရရင် မျိုးဗီဇ(gene) သည် မျိုးရိုးဓလေ့ (heerdity) အလိုက် ဆင်းသက်ပါရှိသော ဗီဇဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပါမည်။ မျိုးရိုးဆိုတာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ဆင်းသက်သော မျိုးနွယ်ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒါကို အခုခေတ်စားနေတဲ့အခေါ်ကတော့ deoxyribonucleic acid ဒြပ်၊ အတိုကောက်အခေါ် DNA ဆိုတာပါဘဲ။ ဒါဟာဘာလဲလို့ဆိုရရင် လူ့ခန္ဓာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု့တွင် ကလာပ် စည်းသည် အရင်းခံယူနစ်ဖြစ်ပြီး မျိုးရိုးစဉ်လာမျိုးဗီဇပြ ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ ဆေးပညာအရ ဥပမာပြောရရင် မျိုးဗီဇတွင် အမျိုးသမီးတွင် X ခရိုမိုဆုမ်း တစ်ခုတည်းသာပါသော အတွဲ၂တွဲဖြစ်တည်ပြီး အမျိုးသားတွင် X ခရိုမိုဆုမ်း နှင့် Y ခရိုမိုဆုမ်း ပါသော အတွဲ၂တွဲဖြစ်တည်ကာ သန္ဓေတည်မှု့တွင် အမျိုးသမီး X နှင့် အမျိူးသား X ခရိုမိုဆုမ်းပေါင်းမိသောအခါ မိန်ကလေးမွေးဖွားပြီး၊ အမျိုးသမီး X နှင့် အမျိုးသား Y ခရိုမိုဆုမ်းပေါင်းမိသောအခါ ယောက်ျားလေးမွေးဖွားခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒီကထဲက မိဘရဲ့ မျိုးဗီဇဟာ သားသမီးမှစတင်ရှိခဲ့ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် မျိုးဗီဇသည်လည်း ရောဂါဖြစ်ခြင်း ကျန်းမာခြင်းတွင် တစ်စိတ်တဒေသ ဆက်နွယ်ကြောင်း လေ့လာမှု့သုတေသ အရဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိမိ မျိုးရိုးတွင် ဖြစ်တတ်ခဲ့ဘူးသော ရောဂါများဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အကြောင်းအချက်များကို လေ့လာပြီး မိမိအနေနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု့ သင့်လျော်စွာနေထိုင်မှု့ပြုသင့်ပါတယ်။
သက်ရှည်ကျန်းမာဖို့ ဒုတိရအချက်က အစားအသောက် ဖြစ်ပါတယ်၊ အစားအသောက်တွင် စားသုံးနေကျ အစားအစာ၊ အစာဆန်း၊ နေရာဒေသထွက် အစားအစာ၊ ကန့်သတ်တားမြစ်သော အစားအစာ၊ ပြုပြင်စီမံ ထားသောအစားအစာ၊ သဘာဝ အစားအစာ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိလေ့ရှိပါတယ်၊ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးကို အခြေခံတဲ့ အစားအစာနဲ့ စားသောက်မှု့ဓလေ့တွေလည်း ကွာခြားခဲ့ကြပါတယ်၊ ဥပမာ ဟိန္ဒူများသည် အမဲမစားခြင်း၊ သက်သတ်လွတ်စားခြင်း၊ မူစလင်ဘာသာဝင်များမှာ ၀က်သားမစားခြင်း စသည်ကဲ့သို့ အစဉ်အလာ စားသောက်မှု့ ကွဲပြားချက်တွေလည်းရှိပါတယ်၊ အဲလိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနဲ့ အစကို ရွေးချယ်စားခြင်းတွေကလည်း အသက်ရှည် အနာမဲ့ကြောင်းကို အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ကြောင်း လေ့လာမှု့မှာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်၊ တစ်ချို့ဆရာဝန် တွေဆို အနီသွေးအသားထက် ဖြူလျော်သွေးအသားတို့ကို ချင့်ချိန်စားပေးဖို့တောင် တိုက်တွန်းတတ်ကြ ပါတယ်၊ တစ်နေ့မည်ကဲ့သို့ စားသောက်နေခြင်းဖြင့် အစားအစာတွင်ပါရှိသင့်သည်ကိုလည်း အာဟာရဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေက လမ်းညွှန်ပေးတာလဲ ရှိကြပါတယ်၊ ဘာသာအရ ဥပုသ်စောင့်ခြင်းသည်လည်း သက်ရှည် ကျန်းမာစေမှု့တွင် အထောက်အပံရှိကြောင်း လေ့လာမှု့မှာ တွေ့ရပါတယ်၊ သို့သော် သတိပြုရန်အချက်က အစာရှောင်လွန်ခြင်း ဓလေ့ထုံးတမ်းအစာကို အတိုင်းအဆမဲ့ စားခြင်းတွေကဖြင့် အစာလည်းဆေး မဖြစ်ဘဲ အစာလည်း ဘေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သာဓကအနေနဲ့ပြောရရင် ပိန်ပိန်ပါးပါး ဖြစ်ချင်လွန်းသဖြင့် မိန်ကလေးများသည် တက်ရွယ်မှာပင် အစားအစာ ရှောင်လွန်းရာမှ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းရောဂါ(ခံတွင်းပျက်ခြင်း) ရလာစေပါတယ်၊ အဲဒါကို anorexia လို့ခေါ် တဲ့ အစာရှေင်ရာမှ ပိန်ကျလာပြီး မစားချင်မသောက်ချင်နှင့် ရောဂါဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ ထိုသို့လွန်ကဲစွာ အစာရှောင်ခြင်းကတဆင့် ခံတွင်းပျက်ပြီး စိတ်လက်မအီသာဖြစ်ကာ ဖျားနာခြင်းမှာ ကောင်းသောလက္ခဏာ တော့မဟုတ်ပါ ဒါဟာ ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ရာ စိတ်ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် အစာကို မချင့်ချိန်ဘဲ အတိုင်းအဆမရှိ စားတတ်ခြင်းအလေ့ကလည်း ရောဂါကိုဖိတ်ခေါ်ရာရောက်စေ နိုင်ပါတယ်၊ အဲလိုစားသောက်မှု့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးက အရွယ်ရလာရင် ၀လာစေခြင်းပါဘဲ၊ ထိုမှတဆင့် အ၀လွန်ရောဂါနှင့် အခြားရောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အစာကို ချင့်ချိန်စားသောက်ကြဖို့ အသား၊ ငါး နဲ့ အသီးအရွက် အသီးအနှံတွေကို မျှတအောင်စားတတ်ကြစေလိုပြီး နှမျောစာကို စားသောက်ခြင်းမဖို့ အစား အသောက်ဆိုင်ရာ သုတေသီတွေကဆိုပါတယ်။
နေထိုင်မှု့ပုံစံ စရိုက်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်း သက်ရှည်ကျန်းမာခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်၊ ချမ်းသာမှ အသက်ရှည် ကျန်းမာနိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါ ချမ်းသာနေလို့ ထိပ်တန်းဆရာဝန်တွေ ဆေးရုံတွေ အကောင်းဆုံး ဆေးဝါးတွေ မှီဝဲလို့ အသက်ရှည်နိုင်ဖွယ်ရှိပေသည့် ကျန်းမာစွာနေရဖို့အတွက်တော့ အပြည့်အ၀ အာမခံလို့မရ နိုင်ပါ၊ အထက်တွင်ရေးခဲ့သလို မျိုးဗီဇ အရဘဲဖြစ်ဖြစ် အစားအသောက်မဆင်ချင်ခဲ့ရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် အဲလိုဆိုရင် ကျန်းမာရေးနှင့် အတိုက်အခံရန်သဲူဖစ်ပေလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့် မိမိချမ်းသာ ငွေကြေးရှိပေသည် ဖြစ်လာလျှင် ငွေကုန်ခံကာကုသမည်ဆိုပြီး နေချင် စားချင် သလိုနေခြင်းထက် ကျန်းမာအောင် လိုက်လျောညီထွေ ပြုပြင် နေခြင်းက ပိုလို့သင့်လျှော်ပါတယ်၊ အအေးပိုင်းဒေသတွင် ရောက်ရှိနေထိုင်သောအခါ နွေးထွေးသောအ၀တ် အစားမျိုး၊ ပူအိုက်သောဒေသတွင် ရောက်ရှိသောအခါ ချွေးစိုမှု့ကြောင့်အအေးပြန်မပတ်ရအောင် လေ၀င် လေထွက်ကောင်းသော ပွသော ချည်ထည်လိုမျိုးအေးသည့် အ၀တ်အစားမျိုး စသည်ဖြင့် သင့်လျော်အောင် စီမံဝတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်၊ ကျေးဌက်တွေရဲ့ နေထိုင်မှု့ကို လေ့လာအတုယူနေကြသင့်တယ်လို့လည်း ရှေးဆရာ များကဆိုလေ့ရှိပါတယ်၊ ဥပမာ အေးသည့်ရာသီတွင် ဆောင်းခိုဌက်များ တွင်းအောင်းသည့်ပုံစံ၊ မိုင်ထောင်ချီ ဝေးသော အအေးဒေသမှ အုပ်စုလိုက်ပျံကာ နွေးသောဒေသသို့ လာရောက်အသိုက်ဖွဲ့နေတတ်ကြပုံစံ၊ မိုးရွာ နေစဉ် အစုလိုက်ပူးကပ်ထပ်၍ မိုးခိုမှု့ပုံစံ၊ ဒါတွေဟာ သဘာဝကပေးသည့် အသိတရားနဲ့နေထိုင်မှု့ ပုံစံကိုပြတာ ဘဲဖြစ်ပြီး ထိုသို့ သင့်သင့်လျောက်ပတ်စွာ ကျင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းသည်လည်း ကျန်းမာ သက်ရှည်ခြင်းရလာဒ်ကို ရရှိစေနိုင်သည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါ၍ ဘုန်းကြီးပါစေ ကျန်းမာပြီး သက်ရှည်ပါစေ ဆုတောင်းပေးတာလေး ပြည့်စေဖို့အတွက်၁။ မျိုးဗီဇ
၂။ အစားအသောက် ၃။ အနေအထိုင်ပုံစံ တို့ကို ဗဟုသုတအဖြစ် မျှဝေရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၃ မှာ ရွာသူရွာသားအပေါင်းနှင့် စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီး ဘုန်းကြီးပါစေ ကျန်းမာပြီး သက်ရှည်ပါစေ လို့။
ဦးခင်ခကြီး မျှဝေတဲ့ ..
ဘုန်းကြီး အသက်ရှည်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုလည်း ဖတ်ပြီး မှတ်ပြီးသွားပီ ..
ဦးခင်ခကြီး ပေးတဲ့ …
ဘုန်းကြီး အသက်ရှည် ဆိုတဲ့ ဆုလည်း ယူပြီးသွားပီ …
ကိုင်း .. ဒါဖြင့် ..
နှစ်သစ်မှာ လူဂျီးသူမဒွေဂို လိုက်ဂဒေါ့ရင်း မုန့်ဖိုးတောင်းဂျမယ်
ဖင်ပူးတောင်းထောင်ပီးဒေါ့ကို ကုန်း ကုန်း ပီးဒေါ့ ဂဒေါ့ပလိုက်မှာ
မုန့်ဖိုးပေးဖို့သာ လက်မနှေးဂျဘာဇေနဲ့နော် :harr:
ကို အံစာတုံး ရေ ဆုရော မုန့်ရော အကုန်လုံး မလွတ်အောင် ယူချင်နေတော့တာဘဲနော်။
အဦးဆုံးကွန်သူဆိုတော့လည်း ပေးရမှာပေါ့ဗျ၊ ဆုံဖြစ်တဲ့အခါ သတိပေးဗျာ၊ အားမနာနဲ့။
ကျွန်တော်က ခပ်မေ့မေ့မို့ပါ၊ အခုကတည်းတောင် မေ့ချင်သလိုလို ……..။
ပေးတဲ့ ချုနဲ့ ပြည့်ပါဂျေ လေးလေးခ
လေးခင်ခ ပြောသလိုပဲ ကျန်းမာပြီး အသက်ရှည်အောင်လို့ အစားအသောက်နဲ့ အနေအထိုင်ကို ကြိုးစားပြီး ပြုပြင်ရမယ်။ မျိုးရိုးဗီဇကတော့ ကိုယ်မှ မတတ်နိုင်တာဆိုတော့ ထားလိုက်ရတော့မယ်ထင်တယ်။
ပြီးတော့ လေးခင်ခရေ… မိဘမျိုးရိုးလိုက်ပြီး သားသမီးမှာရောဂါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကြားဖူးပါတယ်။ အရေပြားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေကျတော့ကော မျိုးရိုးလိုက်တာမျိုးရှိလားဟင်။ (ဥပမာ- allergic ဖြစ်တတ်တာမျိုးပေါ့။ ဆပ်ပြာနဲ့ မတည့်တတ်တာမျိုးလေ။ )
လေးခလည်း ဘုန်းကြီး အသက်ရှည် ကျန်းမာပါစေ မိဗုံလာကန်တော့ရင်လည်း မုန့်ဖိုးအများကြီး ပေးနိုင်ပါစေ:mrgreen:
မိဗုံတို့ကတော့ ဆုတောင်တောင်းတတ် လိုက်ပုံများဗျာ။
Nyein Nyein ရေ ကျွန်တော်သိသလောက်ရေးရရင် မျိုးဗီဇ ကြောင့်ရောဂါဆက်နွယ်တယ်ဆိုပေမယ့် မိမိမျိုးရိုးမှာဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ရောဂါဟာ မွေးရာပါမဟုတ်ရင်တော့ ကျန်းမာရေးသတိနဲ့ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်လို့ရနိုင်တဲ့ နည်းတွေ၊ ဆေးကြိုစစ်တာတွေ အခုတော့လုပ်လို့ရပါပြီ၊ ဥပမာ မွေးရာပါ နှလုံး ချို့ယွင်းနေတာမျိုးကိုမဆိုလိုပေမယ် ဖခင်ကနှလုံးရောဂါနဲ့ဆုံးခဲ့လို့ သားသမီးမှာ အဲလိုမျိုးဗီဇ အရ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိနိုင်တယ်လို့ ခန်းမှန်တာပါ။ ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့။ အဲလိုပါ။ ပြီးတော့ အရေပြားရောဂါမှာ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် အနာကြီးရောဂါလိုမျိုးက မျိုးဗီဇအရ မျိုးရိုးလိုက်နိုင်ပေမယ့် အနေအထိုင် သွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ allergic ဖြစ်တတ်တာမျိုးတို့ ဆပ်ပြာနဲ့ မတည့်တတ်တာမျိုးတို့ အရေပြားမှိုစွဲတာတို့ကတော့ မျိုးရိုးလိုက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ ရာခိုင်းနှုန်းနည်းပါတယ်ခင်ဗျ။
ဟုတ်ကဲ့ လေးခင်ခ။ အခုလိုသေချာပြန်ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးကျေးပါ။ လေးခင်ခလည်း ဘုန်းကြီးပြီး ကျန်းမာသက်ရှည်နုပျိုပါစေနော်…………..
ကြည်ဆောင်းအဖေရောအမေရော သွေးတိုးရှိလို့ဆရာဝန်ပြရတာ ဆရာဝန်က မိဘနှစ်ပါးလုံးသွေးတိုးရှိလို့ ကြည်ဆောင်းတို့မောင်နှမတွေကို သွေးတိုးဖြစ်နိုင်ခြေများတာမို့ အခုကထဲက သွေးတိုးစာတွေ ရှောင်ဖို့ပြောဘူးပါတယ်..
ဒါကြောင့် အခုကထဲကတတ်နိုင်သမျှ ငန်တာတွေ နဲ့သွေးတိုးမဲ့အစာတွေကိုတော်တော်ရှောင်ဖြစ်ပါတယ်..
မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ပါ.. တနေ့က အဘိုးကြီး အဘွားကြီး အကြောင်း ပိုစ်ကို ဖတ်ပြီး အဘိုးကြိး တယောက် ရဲ့ အထီးကျန်ဆန်တဲ့ ခံစားချက် ကို ချရေးဖို့ အတွေးတစ ၀င်လာလို့ ရေးထားတာ တ၀က်နဲ့ အာရုံတွေ ပျက်သွားလို့ ဆက်ကို မရေးဖြစ်သေးဘူး ဖြစ်နေတယ်.. နောက်ပိုင်း အချောသတ်ပြီးမှ တင်လိုက်အုန်းမယ်..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လေးခ ရေ.
လေးခ ပြောသလို နေထိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး လေးခ ပေးတဲ့ ဆုနဲ.ဖြည့်ပါစေလို…..
mamanoyar လေး သက်ရှည် ကျန်းမာ ဘုန်းကြီးပါစေဗျာ။
ကြည်ဆောင်ရေ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါဗျာ။ သွေးတိုး ဆီချို တို့ကတော မျိုးဗီဇ အရဆက်ဖြစ်တတ်ပေမယ့် အခုလိုကြိုတင်ရှောင်သင့်တာရှေင်ရင်တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျ။
မင်္ဂလာပါ ဆူး ရေ မျော်နေမှာနော်၊ ဆက်ရေးကာ တင်ပေးပါအုံးလို့။
လေးခ ပြောတာဟုတ်ပါဘူး စာပေတွေထဲကမျှမိတာပါ ဗဟုသုတလက်ဆင့်ကမ်းပေါ့ ကိုရွှေတိုက်စိုးရေ။
လူကြီးတွေပေးတဲ့ဆုကို ကြားနေကျမို့ ထူးပြီး မခံစားရပေမယ့်…..
အသက်ရှည်ပြီး ဘုန်းမကြီးတဲ့လူတွေကို တွေ့လာရတော့မှ…
အဲဒီဆုကို လေးလေးနက်နက် ခံယူလာမိတယ်။
ကိုခင်ခလည်း အခုလို ထားရှိရသော စေတနာရဲ့အကျိုးကို ထပ်တူထပ်မျှ ရရှိခံစားနိုင်ပါစေ။ :hee:
ဟုတ်ပ အမ မမ ရေ ဘုန်းကြီးလို့ သက်ရှည်ပါစေ ဆိုတာကို လူကြီးတွေထံက ကြားနေခဲ့တာ ကြာခဲ့ပေမယ် အရင်ကတော့ ဂရုမပြုမိဘူးလေ၊ အခုအရွယ်လေးရလို့ စာပေအဖတ်များလာမှ မသိခဲ့တာတွေသိလာ ရလို့ ဝေမျှဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ။
အမေရိကန်..ယူရုတ်ပီယန်တွေမတော့.. အသက်ကြီးလာရင်.. အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါက.. တော်တော့ကို.. ဒုက္ခပေးနေပုံရပါတယ်..။
ကျန်တာတွေတော်တော်များများကုလို့ရနေနိုင်ပေမယ့်.. အယ်လ်ဇိုင်းမား(သူငယ်ပြန်)ရောဂါက.. အဖြေသိပ်မတွေ့ကြဘူးဖြစ်နေပုံရတယ်..
မြန်မာတိုင်းရင်းနည်းတွေနဲ့.. ဖြေရှင်းနည်းတချို့တင်ပေးနိုင်ရင်.. တင်ပေးစေလိုပါကြောင်း.. ရယ်.. :528:
ရစေတဲ့ပိုစ့်
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြိတ် တောင်းထားတဲ့ ဆုနဲ့ရော
ပို့ စ်ပိုင်ရှင် ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါရစေဗျား
သူကြီးရေ လေ့လာပြန်ဖတ်စုစည်းပြီး ပိုစ့်လေးရေးဖြစ်မယ်ထင်ပါကြောင်း။ အချိန်လေး ခဏပါနော်။
ကိုယ်သိသလို သူလည်းသိပါစေ ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြင့် မျှဝေပေးတာပါ ကိုအလင်းဆက်ရေ။
ပြည့်စေချင်မိပါတယ် Mr. MarGa နဲ့ ဆရာပေ ရေ။
အမှန်ဘဲ အမှန်ဘဲ အမှန်ဘဲ အန်ကယ်ကြီးရေ။
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင် ဆုတောင်းပေးလိုက်ချင် မို့ရယ် အမှန်တကယ်ဖြစ်စေချင်တာရယ် ပေါင်းစုလို့ တောင်းဆုဖြစ်ရပေမယ့် အန်ကယ်ကြီးရေးသလို လုပ်နိုင်ကြဖို့တွေ လိုတာမို့ BC ပေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ပို့ဒ် လေးရေးတင်ပေးတဲ့..။
ဦးခင်ခကြီးလဲ ဘုန်းကြီးလို အသက်ရှည်..။
ဆုံး (ဆယ့်နှစ်ကြိုး) ပြိးလို့ အခက်တွေလဲကျော်လွန်နိုင်ပါစေ…..။
အင်မတန် ကောင်းမွန်တဲ့ အသိပညာပေး စာစုလေးပါ။
ဘဝ မှာ ကံဖြတ်ချိန် ပြတ်ကြရတာဘဲ လို့ ရှိပေမဲ့လဲ အသက်ဉာဏ်စောင့် ဆိုတာ ကံ မဖြတ်ချိန် အထိတော့ လိုတာပါဘဲ။
မဟုတ်ရင် ကံ မဖြတ်ခင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြတ်လိုက်တာလဲ ရှိနိုင်တာဘဲ မဟုတ်လား။
အန်ကယ်ကြီးပြောတာကိုလဲ သဘောကျ ထောက်ခံပါတယ်။
အနောက်တိုင်း နိုင်ငံတွေမှာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား ဖို့ fitness တွေ/ Gym တွေလို အလုပ်တွေက ပံ့ပိုးပေးကြပါတယ်။
တဖြေးဖြေးနဲ့ လူနေမှု အဆင့်အတန်းပေါ်မူတည်ပြီး junk food လို့ သတ်မှတ်ထားတာမျိုးတွေကို ရှောင်လာကြပါတယ်။
ဒီအထဲမှာ အစိုးရရဲ့ ကျန်းမာရေးဌာန ပညာပေးတွေ ကလဲ တတပ်တအား ပေါ့။
ဒီလို လူထုမှာ ပညာရလို့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ကြရင် အစိုးရမှာလဲ စောင့်ရှောက်ရမဲ့ လူမမာ နဲတာပေါ့။
ကိုခင်ခပြောထားတဲ့ သက်ရှည်ကျန်းမာဘို့ အချက်သုံးချက်မှာ-
အစားအသောက်နဲ့ အနေအထိုင်ပုံစံ ၂ မျိုးက
ကိုယ်ညံ့ရင်တော့ ကိုယ်ပျင်းရင်တော့ ကိုယ်မိုက်ရင်တော့ ကိုယ်ပဲခံရမှာပါပဲ….
၀င်ရောက်ကာ ကဗျာစပ်အားပေးခဲ့သူ ဦးကြောင်ကြီး ရေ ကျေးဇူးနော်။
မတွေ့ဆုံဖြစ်တာကြာနေတဲ့ မိုက်လေးရေ လာရောက်ဖတ်ရှု့အားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ၊ ဆယ့်နှစ်ကြိုးဘဲလား ကြိုး ၁၀၀၀ ဆိုရင် ဈေးမှာသွားရောင်းမယ် နေ့တွက်တော့ကိုက်လောက်တယ်လေ။
အရီးရေ အစိုးရက ကျန်းမာရေးကို သတိတရ လုပ်တာဆိုလို့ ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလ ဆိုပြီးလုပ်တာမျိုး ဘဲတွေ့ဖူးသလိုဗျ၊ ကျန် ၁၁ လ လုံးလုံးကတော့ ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်ဘဲ မြင်တာလားလို့။
ဦးပါရေ အမှန်ဘဲဗျာ ကျွန်တော်တို့တောင် အခုလိုစာပေ အဖတ်နည်းခဲ့တဲ့ လူရွယ်ဘ၀တုန်းက ဆင်ချင်အားနည်းလို့ မိုက်စွာနေခဲ့စားခဲ့ပေါ့ဗျာ။ အသိကြွယ်ချင် စာပေဖတ်ပါဆိုတာ အခုမှ မှန်ကြောင်းသိတယ်ဗျာ။